Ukucacisa Umenzeli, Umenzeli Wenukliya Okhulisa Ubunzima - BGT
8 amahora30 AM-17: 00 PM
Izithasiselo ze-Recycle Plastic
Uyinki Remover BT-301/302
Uyinki Remover BT-300
Isitika se-PET Sticker BT-336
SIYAKWAMUKELA ENKAMPANI YETHU
I-Tianjin Best Gain Science & Technology Co, Ltd. (I-China BGT) iyinhlangano yezimboni nezentengiselwano esebenza ukukhiqiza nokuthumela amakhemikhali obuchwepheshe obuphezulu. I-China BGT yamiswa ngonyaka ka-2000. Imikhiqizo eyinhloko ingumenzeli ohlukahlukene wokucacisa, enye i-ejenti ye-nucleating kanye nezithasiselo zokuphinda zisetshenziswe ipulasitiki ezithunyelwe emazweni amaningi eSouth East Asia, Middle East naseYurophu cishe iminyaka engaba ngu-20 ngokuhle kanye nekhwalithi ezinzile.
i-case study show yethu
I-ejenti yokucacisa ingasetshenziselwa ukuthuthukisa ukucaca nokwandisa ukumelana nokushisa kwe-polypropylene ngokusebenzisa i-nucleation ye-polymer. Lokhu futhi kuholela ekuqineni okuthuthukile kwengxenye ebunjiwe kanye nesikhathi esifushane somjikelezo ngesikhathi senqubo yokubumba. Lolu hlobo lwemikhiqizo yefomula enjalo yesakhiwo ivunyelwe yi-FDA evumelekile kusetshenziswa oxhumana nabo bokudla emakethe yomhlaba.
Ngokusebenzisa i-Nucleating Agent, izici eziningi zomkhiqizo zingathuthukiswa, kufaka phakathi i-firm of the material, amandla wokukhiqiza ukungezwani, amandla okuba nomthelela, modulus ye-flexural, izinga lokushisa lokuhlanekezelwa kokushisa, ukuzinza. Kuyacaca futhi ukuthi kungathuthukisa ngokusobala ukwenziwa kwemishini nemishini. Yimpuphu emhlophe engeyona enobuthi engeyona iphunga.
I-Transparent Master Batch ilungele i-crystal resin engaphelele ye-PP & PE njll. Kungathuthukisa ukucaca kwemikhiqizo kanye nobuso obuphezulu, amandla eqine, ukuqina, ukushisa kokuhlanekezela kokushisa nokuqina kosayizi, ukunciphisa umjikelezo wokubumba. Kusetshenziswa ikakhulu ekuguqulweni kwemikhiqizo ye-PP epulasitiki nomjovo we-PP, i-PE yokukhanya okuphezulu kokuhambisa ifilimu elincane, isb ukudla, izinto zokupakisha zezimonyo, isitsha sezokwelapha njll.
Imikhiqizo yethu iqinisekisa ikhwalithi
Umenzeli we-PET Nucleating
I-Polyester ne-Nylon Nucleator
Inqubekela phambili yephrojekthi
Imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni amaningi e-Southeast Asia, Middle East nase-Europe.
Imikhiqizo ye-BGT yimikhiqizo yobuchwepheshe obuphezulu, enencazelo ephezulu, engeyona enobuthi, izici ezinganambitheki.
Noma kunini lapho sinabachwepheshe bokuphendula imibuzo yakho.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi Imininingwane yethu yakamuva
I-Dibenzylidene Sorbitol Transparent Nucleating Agent
I-Dibenzylidene sorbitol Transparent Nucleating Agent ingahlukaniswa ngezinhlobo ezintathu. Isizukulwane sokuqala yi-DBS. Lo mkhiqizo unezinga eliphansi lokungena nokunambitheka okuqinile kwe-aldehyde. Okwamanje, ngenxa yendawo ephansi yokuncibilika ...
Uyini umenzeli we-Transparent Nucleating Agent
Izinto ezijwayelekile ezisobala ze-nucleating agents zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili: izinhlanganisela eziphilayo kanye nezinto ezingaphili. Ama-Inorganic Nucleating Agents ikakhulukazi ama-oxide ezinsimbi, njenge-talc, i-silica, i-titanium dioxide, i-benzoic acid njalonjalo ....
Ngenxa yokumelana nokushisa kwayo okuphezulu, amandla adonsela phansi akhanyayo, ukucubungula okulula nokwakheka, ukuvuselelwa kabusha okulula, nentengo ephansi, i-polypropylene isetshenziswe kabanzi embonini yamakhemikhali, i-fiber fiber, okokusebenza kwasekhaya, ukupakisha, imboni elula nezinye izimboni. Howe ...
Nciphisa uHaze futhi Thuthukisa ukubonakala kwePolypropylene
Ukucacisa i-Agent kungasetshenziselwa ukunciphisa i-haze nokwenza ngcono ukucaciseleka kwe-polypropylene ngokusebenzisa i-nucleation ye-polymer. Lokhu futhi kuholela ekuqineni okuthuthukile kwengxenye ebunjiwe kanye nesikhathi esifushane sokujikeleza ngesikhathi senqubo yokubumba ....
IChinaplas ngomunye wombukiso omuhle kakhulu emhlabeni wezinto zenjoloba nezipulasitiki ezisetshenziswa kakhulu ezihlonishwa kakhulu yizo zonke izivakashi nombukiso lapho. Ngonyaka odlule, ngesikhathi sombukiso, wonke umuntu wayehlala enomdlandla ophakeme kakhulu kulowo nalowo ...
I-TIANJIN BEST GAIN SCIENCE NE-TECHNOLOGY CO., LTD